PowerAMP Barbaraha u soo bixiddu wuxuu ugu eg yahay barbaraha mobilkaaga | Androidsis
Awood-siiyaha PowerAMP wuxuu galaa beta si aad u barbareyso sida marnaba codka moobiilkaaga markaad dhageysaneysid Spotify iyo kuwa kale
Isuduwaha PowerAMP wuxuu yimid beta si codka loogu riixo xadka ka socda moobilkeena. Waxaan ka hadleynaa barnaamij 'isdabamarin' ka socda warbaahinta caanka ah ee PowerAMP isla markaana tan iyo bilowgii Android ay ahayd tii sida ugu wanaagsan uga faa'iideysatay mawduucyadeena muusikada.
Waxbadan baa isbadalay ilaa maalmahaas sidaa darteed hadda PowerAMP ayaa isa sii amaahiya si ay u qiimeyso waxa ay siisay maalintiisa caan ah oo dhan, iyo in uu ahaa mid kale oo aan ahayn ay barbaraha weyn. Waana wax si sax ah wax noogu keenaya betakan oo aan dhammaanteen ka tijaabin karno moobilkeenna. Aynu ku sameyno barnaamijkan weyn si aan u barbar dhigno waqtiga dhabta ah xitaa muusigga ka dhawaaqaya Spotify.
1 Isleeg codka ka soo baxaya moobilkaaga adoo dhageysanaya Spotify
2 Saddex tab oo lagu barto dhawaaqa PowerAMP Equalizer
3 Isticmaal horay-u-dhigashada
Isleeg codka ka soo baxaya moobilkaaga adoo dhageysanaya Spotify
Haddii aan jeclaan lahayn PowerAMP Equalizer in beta wax, waa sababta qalab aan u adeegsan karno inta aan adeegsanayno adeegga qulqulka ee muusikada la jecel yahay waxaanan dooneynaa inaan siino bartaas tayada ah codka. Waana run inay u shaqeyso sida soojiidashada markaan dhaqaajino barbaraha barnaamijkan soo galay beta.
Sidaan soo sheegnay, PowerAMP Equalizer wuxuu lamid yahay 'wareejin' PowerAMP (iyo in sanadka la cusbooneysiiyay taageerada Android Auto) loogu talagalay sii caan ku ah barbaraha ay sidato. Si kale haddii loo dhigo, markii aad bilawdo barnaamijka waxaad arki doontaa saddex tab oo kuu oggolaanaya inaad codka la mid dhigto baaska, dhexdhexaadka iyo seddexleyda, oo lagu daro shaashad kale oo aan u tagi doonno heerar taxane ah oo karti u leh qaabeynta wax soo saarka codka.
Iyo sida waqtigan xaadirka ah waxay ku jirtaa beta, oo bilaash ah, runta oo aan xitaa la rinjiyeynin si aan ugu daboolno barnaamijkan oo aan xitaa u kordhinno mugga ku yimaada sida caadiga ah casriga casriga ah ee Android.
Saddex tab oo lagu barto dhawaaqa PowerAMP Equalizer
Laga soo bilaabo tabka ugu weyn ee PowerAMP Equalizer waxaan leenahay interface ah oo u qaybsan laba iyo in qaybta sare aan ku leenahay dhamaan slider, gaar ahaan ilaa 10, loogu talagalay basaska, dhexdhexaadka iyo seddexleyda. Xagga hoose waxaan u soconaa laba badhan oo waaweyn oo loogu talagalay baas iyo seddex jeer oo sidaas ayaan u siineynaa xoogaa labadan dhinac ee codka.
Midigta dhinaceeda, dhanka bidix, waxaan leenahay seddex badhan oo naga xiiseynaya laakiin si fiican u daneynaya. Ecu si aad u kiciso barbaraha oo markaa 'u maqasho' waxa uu u dhawaaqayo oo waxaan ku arki karnaa barbaraha garaafka sida muusigeenu u ciyaarayo inta aan dhagaysanayno liiska 'Spotify playlist' (runti way noqon kartaa qaar ka mid ah kuwan oo la xidhiidha freestyle iyo flamenco oo ka socda Spotify).
Intaas aan ahayn waan cusbooneysiin karnaa daawadayaasha si sawirro aan la taaban karin loo soo saaro oo taga dhawaaqa muusiggeenna. Runtuna waxay tahay inay jiraan dhammaan astaamaha si shaashadda moobiilkeennu ugu dhowaato sidii diskooga.
Dabcan, iyo kuwa aan doonaynin inay qumbaha jabiyaan oo ay horumariyaan tayada codka moobiilkooda, waxaan leenahay presets ee shaashadda weyn. Sidaan oo kale ayaan ugu habeyn karnaa horay-u-dejiyahayaga qaab shaqsiyeed oo aan ku keydin karno.
Qeybta labaad ee PowerAMP Equalizer waxaan u tagnaa mugga ugu muhiimsan, dheelitirka iyo waa maxay kombaresarada kaladuwan ee firfircoon (oo ka taxaddar dejintan maxaa yeelay waxay sare u qaadeysaa codka waxayna ka dhigi kartaa samaacadahaaga "pop"). Laakiin halkan waxaan ka heli karnaa dejinta sida weerarka, suuska, saamiga isku-buufinta, soo noqnoqoshada iyo faa'iidada. Dejinta si aad codka ugu hagaajiso heer sare.
Markaa way timaaddaa Isuduwaha PowerAMP oo ah barbaro dhammeystiran iyo qalab aad u wanaagsan oo lagu weheliyo kalfadhiyadayada qulqulka leh adeegga aan jecel nahay. Hadda waxaan arki doonnaa marka tusaalaha ka soo baxa beta si aan ugu raaxeysanno wararka iyo cusbooneysiinta. Qalab weyn oo loogu talagalay kuwa jecel codka wanaagsan iyo muusikada wanaagsan ayaa loo simay sidii ay ahayd.
Developer: Max’ed xasan
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Awood-siiyaha PowerAMP wuxuu galaa beta si aad u barbareyso sida marnaba codka moobiilkaaga markaad dhageysaneysid Spotify iyo kuwa kale
Samsung waxay si maldahan u tilmaameysaa luminta xadka xusuusta
Dagaalkii Polytopia wuxuu ku helayaa cusbooneysiin weyn 'balaadhinta' Moonrise: isboorti ciyaartoy badan iyo inbadan